विदेशबाट घर आउँदै हुनुहुन्छ? यी सामान ल्याउँदा लाग्दैन भन्सार – Khula kura
विदेशबाट घर आउँदै हुनुहुन्छ? यी सामान ल्याउँदा लाग्दैन भन्सार
काठमाडौं- दसैँमा विदेशबाट घर फर्कँदै हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ भने ल्याउने विदेशबाट ल्याउँदा कतिपय सामानमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्दैन।
केही सामानको भन्सार शुल्कमा सीमितता तोकिएको छ। सीमितता तोकिएका सामान बढी ल्याएमा जफत हुने तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ।
लकडाउन हुने हल्लाका बीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय, आयो यस्तो सन्देश…